Nofap Made Easy - သင့်ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောကိရိယာများ (၁၇ နှစ်အရွယ်) - Your Brain On Porn
Nofap Made Easy - သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောကိရိယာများ (၁၇ နှစ်အရွယ်)
အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောနယ်သာလန်နိုင်ငံမှလူတစ် ဦး သည်သူ၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်စေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည် မေးတာကိုနားမလည်ရင်အင်္ဂလိပ်ဟာငါ့ပထမဘာသာစကားမဟုတ်ဘူး ငါ Ive ခံစားခဲ့ရပုံနှင့်အခြား shit ... စိတ်ဓာတ်ကျ, အဖွဲ့ခွဲ, အချိန်ဖြုန်းစသည်တို့ကိုအခြားပုံပြင်များအများအပြားလိုပဲဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်မှာရှိလဲ၊ ငါဘဝမှာရှေ့ဆက်သွားဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း noFap အခမဲ့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်အများကြီးဖန်တီးပေးပါတယ်။
ငါကိုအောက်တွင်ဖော်ပြအရာတို့ကိုငါအပိုစွမ်းအင်ပိုက်ကွန်အပေါ်အချက်အလက်များ၏မရေမတွက်နိုင်အောင်ဖတ်နေသုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်းချင် dont နိုင်အောင်အများကြီးစွမ်းအင်ပေးပါ။ ဒါဟာဘာမှမအမှုကိုပြုရ doesnt ။ လှုံ့ဆျောမှုစည်းကမ်းအမှုတို့ကိုပြုရရှိကြောင်း, bullshit ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါလျော့နည်းစိတ်မပူပါနဲ့ငါမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်သည်ငါ့စွမ်းအင်ကိုတက် fuck ဆိုတဲ့ dont သောအခါအလမ်းပိုကောင်းအိပ်ထဲကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2013 Im အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်သည်ငါ့အားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါအစပြုသူပထမဦးဆုံး2ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းထောက်ခံမှုဒီမှာလာသင့်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းအပေါ်သဘောတူပေမယ့်တစ်ဦးစွဲဖြစ်လာပါစေ dont ။ တဦးတည်းဖှယျ post ကိုထွက် Print သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခံစားရအခါတိုင်းကြောင့်ဖတ်ပါ။ Nofap သင်၏အသက်တာ aswell ၏အခြားရှုထောင့်တိုးတက်စေရန်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါ aswell နှင့်အတူရုန်းကန်ရသော Reddit ပေါ်တွင်ကြောင့်အချိန်ဖြုန်း dont ပေးပါ။
သင်သည်လက်ျာအတွေးအခေါ်တွေရှိပါကကျွန်မအောက်တွင်အကြံပေးချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့အချို့အစွမ်းထက်ဘဝကိုမျှဝေပါ။ Ive အခြားသူတွေ Im နေဆဲအတူရုန်းကန်နေ, ငါ့အသက်ရှင်ခြင်းသို့ succes နှင့်အတူအချို့သောသည်ဤအကောင်အထည်ဖော်ကျင့်သုံးခဲ့တာ။
အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း: သင်၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများထံမှကောက်ယူဖြစ်ကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုဆေးကြောတော်မူ၏။ နံနက်ယံ၌သင်တို့ကိုနှိုးနဲ့သင်တစ်ဦးသူဌေးများကဲ့သို့ခံစားမိစေသည်။ 1 ဇွန်လကတည်းကအအေးရေချိုးခန်းခဲ့, havent ကတည်းကတစ်ရက်လွဲချော်။ ငါသည်ငါ့ချွတ်အခြေစိုက်ပြောပြနိုင် အတှေ့အကွုံဒါကြောင့်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။
အစောပိုင်းနှိုးခြင်း: သည်ဟု 1 နာရီကျော်နှစ်စဉ်ပါလိမ့်မယ်, အစောပိုင်းကနေ့စဉ် 300h နှိုးထဆိုပါစို့။ သငျသညျသူတို့အား 300 နာရီအတွင်းကျွမ်းကျင်နိုင်သလဲဆိုတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်; လေ့လာမှု, လေ့ကျင့်ခန်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုပျော်မွေ့။ ကိုယ့်အိပ်ရာထဲကရကျိုးကြောင်းညီညွတ် dont ။
တှေးတောဆငျခွ: အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်ယနေ့စတင်ပါဖို့မမျှအကြောင်းပြချက်ထကြည့်ပါ။ Ive 10 ရက်ပေါင်းကျော်ဘို့ 60 မိတှေးတောဆငျခွခဲ့တာ။ ရမ္မက်ထသောအခါတစ်ခါတလေကိုယ့်အစားသူတို့အပျေါမှာထသရုပ်ဆောင်ထက်သူတို့ကိုစောငျ့ရှောကျ။ တခါတရံမှာ Im အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျပေမယ့်တိုတောင်းတဲ့ 10min session တစ်ခုထိုနောက်ငါလမ်းပိုကောင်းနှင့်အများကြီးပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ခံစားရတယ်။ လျှော့ချတွေပေါ်မှာမကောင်းမြင်စိတ်တွေပေမယ်ကြောင့် noFap ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေက၎င်း၏သည်မကြာမီကပြောင်းလဲနေတဲ့။ စာရင်းပြုစုဖို့လမ်းလည်းအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရုံကိုစတင်ပါ။
လှုပ်ရှားမှု: တစ်နာရီခန့်အဘို့ / သံသရာနေ့စဉ် Walk ။
စာဖတ်ခြင်း: ငါအမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်အမြဲ procastinated ။ နောက်ကျောသြဂုတ်လအတွင်းကကျွန်မစတင်စာအုပ်တွေ freaking5ဖတ်ပါ။ ဒါဟာအလေ့အထဖြစ်လာသည်နှင့်ငါကအများကြီးပျော်မွေ့။ အထက်ပါအပြင်, သငျသညျအသံစာအုပ်များမှစာရင်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်။ သငျသညျလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာစမတ်ရတဲ့နေကြသည်။
Bioenergetics / န့ ်.: အထူးသဖြင့်သင်ကနိုးထညာဘက်ပြီးနောက်, နံနက်ယံ၌။ အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကဲ့သို့အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ရှင်းပြဖို့မလိုအပ်ပါကခံစားရသည်။
အိပ်ညသန်းခေါင်ယံမှာအိပ်ပါ။ ညသန်းခေါင်မတိုင်မီတစ်နာရီလျှင်သုံးနာရီအိပ်စက်ခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသည်။ မင်းအိပ်ယာမ ၀ င်လို့မင်းပြန်လာတာတွေအများကြီးမြင်ရတော့ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
မျက်နှာပြင်အချိန်ကန့်သတ်။ လူမှုမီဒီယာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ တွတ်တာစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုသောသတင်းများ၊ မလိုအပ်သောအချိန်များကဲ့သို့သောအကျင့်ဆိုးများကိုဖြတ်ပစ်ပါ။ ငါသြဂုတ်လအတွင်းကရက်ပေါင်း ၃၀ အင်တာနက်မရှိဘူး၊ ၄၃ ရက်လုပ်တယ်။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု။
တက်ကြွသောဖြေ - အပျက်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်နေမယ့်အစား (သတင်း၊ nofap၊ တီဗီ bullcrap) အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ - သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအသံစာအုပ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပါ။ ဤအရာကိုသင်အောင်မြင်လိုပါကသင်၏ ဦး နှောက်အတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်တစ်ခုရယူပါ။ မင်းက porn ကိုကောင်းတယ်၊ fapping ကကောင်းတယ်၊ လူတိုင်းကလုပ်တယ်ဆိုတော့ငါဘာကြောင့်မလုပ်သင့်တာလဲ။ အရာအားလုံးကို fuck ဆိုတဲ့။
ရေမသောက်ရ: တစ်ရက်လျှင်တစ်ဂါလံ။ နိုးပြီးတာနဲ့ရေအေးတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရင်မင်းအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
အလေ့အထများ Build: အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြံပေးချက်များအားလုံးသည်အလေ့အထရှိပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ခုတည်းတဦးတည်းရှေ့မှာအကြှနျုပျအဘို့အလေ့အကျင့် werent မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဇွန်လထဲမှာအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနဲ့စတင်များနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်း noFap တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး Streak 51 ရက်နေ၏။ ဒီတော့ငါ့အအကြံပြုချက် noFap နှင့်အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အတူချွတ် start ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းအခြားအမှုအရာတို့ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် unresourceful အလေ့အထများကိုထုတ်ဖြတ်တောက်စတင်ပါ။ unresourceful သောအရာတို့ကိုထုတ်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်, သင်သည်အသစ်သောအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးရန်အဘို့အအာကာသပါစေ။ အလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ခုမှာလျှို့ဝှက်ချက် 30 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုများလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုထိုသို့ပြုကြ၏။
ငါနေချင်တဲ့နေရာငါဆဲ။ စောစောထတာကရုန်းကန်နေတုန်းပဲ။ မနက်တိုင်းမနက် ၆ နာရီမှာနိုးဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး ... ငါအရင်ကထက်စောစောထတယ်။ ငါရေအေးရေလောင်းနေတယ်၊ ​​ဘောလုံးတွေထဲရှူတယ်၊ လှုပ်ရှားတယ်၊ ရေသောက်တယ်၊ စာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊ တွေးတောဆင်ခြင်တယ်။ အတှေ့အကွုံ ဘဝ။ အားလုံးသောငါ3months ago အိပ်မက်မက်ကဖြစ်နိုင်သမျှမဟုတျကွောငျးထင်ခဲ့တယ်။
သူကပြောတယ်ငါအိပ်ရာကိုသွားရန်ရှိသည်ဒါပေမယ့်ငါကဒီစာရေးအပြီးမှာဒါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရသည်။ ဒါဟာအားလုံးသိပ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပေါ်လာ။ ယောက်ျားတွေ, အလေးအနက်ထားဒီယူပါ။ အဆိုပါအကြံပေးချက်များသည်အလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုကောင်းဘို့အသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် 17 အသက်ပဲငါ့အဘို့စတင်ဘဝ Im သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကအစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ဤသူကားငါ၏ noFap 90 နေ့ကပြန်ဖွင့့်အစအဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 2014 ရဲ့ start မှာသငျသညျယောက်ျားတွေကို update ပါလိမ့်မယ်။
ယခုနှစ်အနည်းငယ်အကြာ၌“ ငါနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာက ၂၀၁၃ မှာဖြစ်တယ်” ဟုပြောချင်သည်။
တစ်ရက် 30, 60 နှင့် 90 မှာသငျသညျကျောကိုကြည့်ပါ!
PS: ကငါခန့်မှန်းသတိမမူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ repost ။
nofap Made Easy - သင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်သင်သုံးနိုင်သောကိရိယာများ